Soosaarayaasha Nidaamka Soo Saarida Korontada | Shiinaha Warshad Shisheeyaha Korontada Korontada & Shirkadayaal
300L Nidaamka Soo Saarida Kuleylka Korantada
Magaca Badeecada: Nidaamka Soo saarida Kuleylka Korantada Awood: 300-600L Waxqabadka: Nidaamka wax soosaarka oo dhan, waxaa jira laba qeyb oo loo isticmaalo kuleylka korantada, mid waa mash tun, midna waa digsi Kuleyliyaha korontada Mash Tun waa weel loo isticmaalo habka wax lagu shiido si loogu badalo istaarjiyada ku jira miraha la jajabiyey sokor loogu talagalay halsano. Mashing / tunta waxay ka samaysan tahay bir bir ah ama naxaas ah. Dabka tooska ah ee Mash Tuns waa mid daaran si loo ilaaliyo heerkulka joogtada ah. Waxaa ka mid ah combustio Direct Fire ...
Magaca Badeecada: Nidaamka Soo saarida Kuleylka Korantada Awood: 50-300L Waxqabadka: Nidaamka wax soosaarka oo dhan, waxaa jira laba qeyb oo loo isticmaalo kuleylka korantada, mid waa mash tun, midka waa kettle. Kuleyliyaha korontada Mash Tun waa weel loo isticmaalo habka wax lagu shiido si loogu badalo istaarjiyada ku jira miraha la jajabiyey sokor loogu talagalay halsano. Mashing / tunta waxay ka samaysan tahay bir bir ah ama naxaas ah. Dabka tooska ah ee Mash Tuns waa mid daaran si loo ilaaliyo heerkulka joogtada ah. Waxaa ka mid ah gubashada dabka Tooska ah ...
1000L Nidaamka Soo Saarida Kuleylka Korantada
Nidaamka dhirta oo dhan, waxaa jira laba qaybood oo loo adeegsado kuleylka korontada, mid waa mash tun, midna waa kettle.
Kuleyliyaha korontada Mash Tun waa weel loo isticmaalo habka wax lagu shiido si loogu badalo istaarjiyada ku jira miraha la jajabiyey sokor loogu talagalay halsano. Mashing / tunta waxay ka samaysan tahay bir bir ah ama naxaas ah.
Dabka tooska ah ee Mash Tuns waa mid daaran si loo ilaaliyo heerkulka joogtada ah. Waxaa ku jira qolka gubashada dabka Tooska ah, qiiqa dabka iyo aaladda badbaadada.